ကလေးတွေကို ဘယ်အသက်အရွယ်မှစပြီး စာဖတ်ခိုင်းမလဲ? သူတို့ကို ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးမလဲ? - Chit MayMay
Home Child Teaching ကလေးတွေကို ဘယ်အသက်အရွယ်မှစပြီး စာဖတ်ခိုင်းမလဲ? သူတို့ကို ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးမလဲ?
ကလေးတွေကို ဘယ်အသက်အရွယ်မှစပြီး စာဖတ်ခိုင်းမလဲ? သူတို့ကို ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးမလဲ?
စာအုပ်တွေက မရေမတွက်နိုင်သော ဖြစ်နိုင်ချေတွေအတွက် တံခါးပေါက်တစ်ခုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် စာဖတ်တတ်လာတဲ့အခါ သူတို့အတွက် အံ့ဖွယ်ရာ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်ပေးပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက သင်ယူကြရပါတယ်။ သို့သော် ကလေးတစ်ယောက်ကို စာဖတ်ဖို့ သင်ကြားပေးခြင်းက မလွယ်ကူပါဘူး။ အချိန်နဲ့ သည်းခံမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အခြားစွမ်းရည် အနည်းငယ် မွေးမြူဖို့ လိုအပ်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ စာသားကိုတောင် ဖတ်ရှုဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်ဉာဏ်ရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ကလေးတစ်ယောက် စာစဖတ်ရမယ့်အရွယ်၊ ကလေးတစ်ယောက်ကို စာဖတ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ? ဆိုတာနဲ့ စာဖတ်ခြင်းကနေ ကလေးတစ်ယောက်ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ကလေးတွေ စာဖတ်တတ်အောင် သင်ယူကြရမလဲ?
ကလေးတိုင်းက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ စာဖတ််စွမ်းရည် တိုးတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးသီအိုရီပညာရှင် Jeanne Chall ချမှတ်ခဲ့သော ပုံစံအရ ကလေးအများစုဟာ အောက်ဖော်ပြပါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းသွားရပါတယ်။
Stage0– အကြိုစာဖတ်ခြင်း – ခြောက်လမှ ခြောက်နှစ်အထိ ကလေးတွေဟာ “pseudo-reading,” မှာအများအားဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့လက်ထဲမှာ စာအုပ်တစ်အုပ် ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် စာဖတ်ချင်ယောင်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က များသောအားဖြင့် သူတို့ရှေ့မှာ စာဖတ်ပြခဲ့တဲ့ မိဘတွေ၊ မောင်နှမတွေကို အတုခိုးလေ့ရှိပါတယ်။ အသက် ၆နှစ်အရွယ်မှာ ကလေးတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့ကြားရတဲ့ စကားလုံးထောင်ပေါင်းများစွာကို နားလည်ကြပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကိုသာ ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။
Stage 1 – ကနဦးစာဖတ်ခြင်းနှင့် အနက်ကောက်ခြင်း ။ ကလေးက အသက် ၆နှစ်မှ ၇နှစ်ကြားရှိလျှင် သူတို့ဟာ အက္ခရာနှင့် အသံတွေကြား၊ အရေးနှင့် အပြောစကားလုံးတွေကြား ဆက်နွယ်မှုကို သိရှိနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကို စတင်သိရှိလာကြပြီး စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုသာ အသံထွက်နိုင်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူတဲ့အခါ ဒီကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုက သူတို့ကြားရတဲ့ စကားလုံး ၄၀၀၀ကျော်ကို နားလည်စေဖို့နှင့် ကွဲပြားခြားနားသော စကားလုံး ၆၀၀အထိကို ဖတ်ဖို့ ကူညီပါတယ်။
Stage2– အတည်ပြုခြင်း နှင့် သွက်လက်ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိုင်ခြင်း ။ ၇နှစ်မှ ၈နှစ်အကြားကလေးတွေဟာ သူတို့အရင်က ကြားခဲ့ရတဲ့ ရိုးရှင်းသောပုံပြင်လေးတွေကို ဖတ်တတ်ဖို့ သသ်ယူလာကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ decoding skills (အနက်ကောက်ကျွမ်းကျင်မှု), ဝေါဟာရအမြင်နှင့် စကားစပ်သဲလွန်စတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် သူတို့စာဖတ်ကြည့်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကနေ ကလေးတွေဟာ တခြားလူတွေဖတ်ပြတာကို နားထောင်ခြင်း၊ သူတို့ဘာသာ ဖတ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့reading skills ဖွံဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်အဆုံးမှာ သူတို့ကြားခဲ့တဲ့ စာလုံးပေါင်း ၉၀၀၀လောက်ကို နားလည်လာပြီး စကားလုံး ၃၀၀၀လောက်ကို ဖတ်တတ်လာပါတယ်။
Stage3– သင်ယူခြင်းအသစ်အတွက် စာဖတ်ခြင်း။ အသက် ၉နှစ်နှင့် ၁၃နှစ်ကြားကလေးတွေဟာ ဗဟုသုတအသစ်၊ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ရရှိဖို့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ စာသားတွေကို ဖတ်တတ်အောင် သင်ယူလာကြပါတယ်။ ဒီအဆင့်ရဲ့အစမှာ ကလေးတွေဟာ နားထောင်ခြင်း နားလည်မှုမှတဆင့် လေ့လာသင်ယူလေ့ရှိကြပြီး ဒီအဆင့်ရဲ့အဆုံးမှာ စာဖတ်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းမှတဆင့် သင်ယူနိုင်လာကြပါတယ်။ ကလေးတွေ စာဖတ်ခြင်းကို လေ့လာစဉ်မှာ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း လိုက်လုပ်နိုင်သော်လည်း အသက် ၄နှစ်မှ ၅နှစ်အကြား ကလေးတွေကို ပုံမှန်စာဖတ်ပြခြင်းက ဘဝနောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ စာဖတ်ခြင်းနှင့် သိမြင်မှုစွမ်းရည်အပေါ် အပြုသဘောသက်ရောက်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကလေးတွေ စာဖတ်ခြင်းမှာ အခက်အခဲရှိနိုင်သလား?
စာဖတ်ခြင်းက အချို့သော ကလေးတွေအတွက် အရမ်းခက်ခဲတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး ဒါက ကလေးတွေရဲ့ ဉာဏ်ရည်အဆင့်နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ အချို့သော ကလေးတွေဟာ အရာရာကို နှေးကွေးသော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သင်ယူစေနိုင်တဲ့ dyslexia ကဲ့သို့သော အားနည်းချက်အချို့ ရှိနိုင်သော်လည်း များစွာသောကိစ္စတွေမှာ စာဖတ်ခြင်းကို စတင်ဖို့ အချိန်နှင့် အကူအညီတွေ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေအား ကောင်းစွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရပါက နောက်ပိုင်းမှာ မေမေတို့ သင်ကြားပေးဖို့ ကြိုးစားသမျှကို နားလည်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ကို စာဖတ်တတ်အောင် သင်ယူဖို့ ဘယ်လိုလမ်းညွှန်မလဲ?
မေမေတို့ကလေးလေး စာဖတ်တတ်လာအောင် ကူညီဖို့ အောက်ပါအကြံပြုချက်တွေကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သို့သော် မစတင်ခင်မှာ ကလေးကို စာဖတ်ဖို့ အတင်းအကျပ်မခိုင်းသင့်ပါဘူး။ အားပေးပြီး စာဖတ်လိုစိတ်ဖြစ်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
၁။ ကလေးကဗျာတေးနှင့် သီချင်းလေးတွေသုံးပါ
ကလေးကဗျာတေးလေးတွေ နားထောင်ခြင်းက အသံတွေနဲ့ syllables တွေကို သင်ယူဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သူတို့ကြားတဲ့သီချင်းတွေကို လက်ခုပ်တီးခြင်းဖြင့် စည်းချက်ကို တည်ဆောက်ခြင်းက အသံထွက်အသိပညာကို တိုးပွားစေပါတယ်။ ဒါက သင့်ကလေးရဲ့ သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ စကားလုံးကဒ်ပြားတွေ ပြုလုပ်ပါ
ပုံတစ်ပုံနဲ့ ပုံရဲ့အမည်ကို ရေးသားထားတဲ့ flashcard အသေးလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို ပုံတစ်ပုံပြပါ။ ပြီးရင် အရာဝတ္တုရဲ့အမည်ကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ဖတ်ပြပါ။ စာလုံးတိုင်းကို ထောက်ပြခြင်းအားဖြင့် နာမည်ကို စာလုံးပေါင်းပြပါ။ အက္ခရာစကားလုံး ၂လုံး- ၃လုံးအထိသာ အသုံးပြုပါ၊
၃။ စာဖတ်တဲ့အလေ့အထကို ထည့်သွင်းပါ
ကလေးတွေဟာ လေ့လာခြင်းနှင့် တုပခြင်းမှတဆင့် သင်ယူကြပါတယ်။ မေမေတို့ မကြာခဏ စာဖတ်နေတာကို သူတို့မြင်ရင် ထိုအလေ့အထကို မှတ်ထားပြီး စာမဖတ်တတ်သည့်တိုင်အောင် စာအုပ်တစ်အုပ် ကောက်ကိုင်ပါလိမ့်မယ် မေမေတို့ရဲ့ စာဖတ်တဲ့အလေ့အထက စာအုပ်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်၊ ကလေးနှင့်အတူ ညတိုင်း စာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့စာဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
၄။ ဂိမ်းတွေမှတဆင့် စာဖတ်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးပါ
စာဖတ်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးကို ကစားစေခြင်းအားဖြင့် သင့်ကလေးကို စာဖတ်တတ်အောင် အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းသင်္ကတတွေ၊ box အပြင်ဘက်မှာ ရေးထားတဲ့ ကစားစရာနာမည်တွေကိုတောင် ဖတ်ပြဖို့ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
၅။ sight words တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ
sight words ဆိုတာက ကလေးဖတ်တဲ့ စာမျက်နှာတိုင်းနီးပါးမှာ ပေါ်လာတဲ့ တွေ့နေကျ စကားလုံးတွေ၊ အတိုလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ဒီစကားလုံးတွေကို နှလုံးသားဖြင့် သင်ယူဖို့ လိုပါတယ်။ မေမေတို့ကလေးက ဒီစကားလုံးတွေကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့နည်းဖြင့် သင်ယူနိုင်ဖို့ ကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်ခု (သို့) ဇယားကွက်တစ်ရွက်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
၆။ သူတို့နဲ့ စကားပြောပါ
ကလေးကို တတ်နိုင်သလောက် စကားပြောပါ။ သူတို့ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အပြည့်အဝဖြေဆိုနိုင်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးလေးတွေ မေးပါ။ ကလေးနဲ့ စကားပြောခြင်းက သူတို့ရဲ့ ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကို တိုးတတ်စေပြီး စာဖြင့်ရေးသားထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို သူတို့ကြားခဲ့သမျှနဲ ဆက်စပ်ဖို့ ပိုလွယ်စေပါတယ်။
၇။ သာမန်စကားလုံးတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါ
မကြာခဏ အသုံးပြုတဲ့ တွေ့နေကျ စကားလုံးတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ရွတ်ပြပါ၊ ဖတ်ပြပါ။ မတူညီတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပေါင်းစပ်ဖို့အတွက် အဲဒီအက္ခရာတွေကို သုံးပါ။
၈။ သူတို့ စိတ်ဝင်စားမယ့်စာအုပ်တွေ ဝယ်ပါ
မေမေတို့ကလေးက စကားလုံးတွေကို တဖြည်းဖြည်း အသိအမှတ်ပြလာတဲ့အခါ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ် အခြေခံပြီး ကလေးစာအုပ်တွေကို ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် ရိုးရိုးစာကြောင်းတွေကို ဖတ်ဖို့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ သူတို့စိတ်ဝင်စားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိရင် ပိုဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။
၉။ အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင် ရှင်းပြပါ
ကလေးကို သူတို့ဘာဖတ်နေသလဲဆိုတာ ပိုနားလည်စေဖို့ ဝါကျတစ်ကြောင်းဖတ်ပြပြီး အဲ့ဒီဝါကျမှ သူတို့နားလည်ထားတဲ့အရာတွေကို ရှင်းပြဖို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဝါကျမှာ အဓိကစာလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အလေးပေးဖော်ပြပြီး ဝါကျရဲ့ အဓိပ္ပာယ်အတိအကျကို ရှင်းပြပါ။
အဘိဓါန်ကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ မသင်ပေးဘဲ သင့်ကလေးကို စာအုပ်မဖတ်ပါစေနဲ့။ ကလေးတွေဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက လွတ်လပ်စွာ စာဖတ်တတ်လာတာနဲ့ စကားလုံးအသစ်တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ဖို့ အဘိဓါန်ကို ရည်ညွှန်းရန် အားပေးပါ။ ဒီအလေ့အကျင့်က သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ သူတို့ရဲ့ ဝေါဟာရကို ချဲ့ထွင်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
Previous articleကလေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ကို ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ရှာဖွေခြင်း
Next articleကလေးရဲ့Communication Skills ကို အားကောင်းစေဖို့ နည်းစနစ်များ